ပန်းတုံးတိုင်ဟူသည် အနာဂါတ်၌ဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်သည့် ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ လူသည် ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဖို့ ဦးစွာပထမ ပညာရှာကြသည်။ ပညာစုံသည့်အခါ ဒုတိယ စီးပွားရှာကြသည်။ ထို့နောက် တတိယအရွယ်၌ တရားရှာကြသည်။ လူ့ဘဝ အသက်တာကို အချိုးကျခွဲပါက တချို့က ပညာရှာ၊ တချို့က စီးပွားရှာ၊ တချို့က တရားရှာကြပါသည်။ တရားကို နောက်ဆုံးမှ ရှာကြသည်။
တရားကို အဘယ့်ကြောင့် ရှာကြသနည်း ဟု ဆိုသော် တမလွန်အရေး တွေး္ပ၍ စိတ်ပူကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူ့အထဲ၌ ဓမ္မာရုံရှိသောကြောင့် လူသည် အမြဲအသက်ရှင်မည်မဟုတ် မကြာမီ သေရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အာမခံချက် ရထားဖို့လိုကြောင်းကို အသိပေးပါသည်။ ပန်းတုံးတိုင်ဟု ဆိုရာ၌ လောကီနှင့်ဆိုင်သော ပန်းတုံးတိုင်ရှိသကဲ့သို့ လောကုတ္တရာနှင့်ဆိုင်သော အာမခံပန်းတုံးတိုင် ရှိဖို့ အရေးကြီးလှပေသည်။
လောကတွင် ဘာသာတရားများစွာရှိသည်။ လူသည် မကောင်းမှု ဒုစရိုက်ပြုမိသည့်အခါ တရားအရ သေချာသည့်အရာမှာ အပ္ပါယ်လားရမည့် ဖြစ်အင်ပေတည်း။ ဘာသာတိုင်း ထိုကဲ့သို့အခြေအနေများကို လူတို့သိဖို့ရန် မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ ဤပန်းတုံးတိုင်သည် အပြစ်ရှိသော လူသားတိုင်းက ရှောင်လွှဲမရသည့် အရာ ဖြစ်၍ ထိုအခြေမှ လွတ်ဖို့ရန် ကယ်တင်နိုင်သူမှာ ဘုရားရှင်သာ ဖြစ်ပေသည်။ ဘုရားရှင်နှင့် တွဲဘက်၍ တရားရှိနေပြန်သည်။ ထိုအခါ တရားကို သိပြီး အကျင့်သီလဆောက်တည်မှုထက် သာလွန်အရေးကြီးသည့် အရာမှာ သံဝေဂတရားဖြစ်သည်။ သံဝေဂတရား မရပါက မည်မျှကောင်းသည့် အရာကို ကြားသိစေကာမူ အကျိုးမပွားနိုင်ပေ။
သံဝေဂတရား ရှေ့ထားပြီး နှလုံးသားနှင့် ဆင်ချင်တမ်းတပါက ဘုရားကို မတွေ့နိုင်စရာအကြောင်း မရှိပါ။ အကြောင်းမှာ စိတ်နှလုံးက ခံစားနေရသော သံဝေဂတရားကို စိတ်နှလုံးကျောက်ကပ်ကို စစ်ဆေးသော ဘုရားရှင်က သိမြင်ပါသည်။ ကျန်ုပ်၏ အတိတ်ဖြစ်စဉ်ကို ဆင်ချင်၍ နှလုံးသား၌ နောင်တရားရပါက အမှန်ပင်အကျိုးခံစားစရာ ရှိပါသည်။ "ဆိုးသောသူသည် မိမိလမ်းကို၎င်း၊ မတရားသောသူသည် မိမိအကြံအစည်တို့ကို၎င်း စွန့်ပစ်၍ ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ ပြောင်းလဲပါစေ၊ သို့ပြုလျှင် သနားတော်မူလိမ့်မည်"1 ဟု ဂတိတော်ရှိပါသည်။ ကျန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့ လျှောက်လှမ်းနေသည့် ဒုစရိုက်လမ်းကို စွန့်ပြီး နောင်တစိတ်နှင့် ဘုရားရှင်ထံတောသို့ ပြန်လာပါက အသက်ရှင်သောဘုရား၊ သနားခြင်း ဂရုဏာနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော သဗ္ဗုညုတဥာဏ်တော်ရှင် ဘုရားရားထံမှ မေတ္တာနှင့်လက်ခံခြင်း၊ သနားခြင်းဂရုဏာနှင့် ကျေးဇူးပြုခြင်းကို အမှန်ပင် ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
သနားခြင်းဂရုဏာသည် အသက်ရှင်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၌သာ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်ုပ်တို့သည် သနားခြင်းဂရုဏာကို ခံစားရဖို့ ကျန်ုပ်တို့ အမှီပြု ကိုးစားသောအရှင်သည် အသက်ရှင်သောပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ဖို့လိုပါသည်။ မေတ္တာနှင့် ကျေးဇူးပြုနိုင်ဖို့ရန်လည်း အသက်ရှင်သောပုဂ္ဂိုလ်မှသာ ပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဂရုဏာစိတ် မေတ္တာစိတ်က လူဆိုးကိုချစ်၊ အပြစ်သားကို ချစ်သော်လည်း ကယ်တင်၍မရ၊ သစ္စာတရားက ခံနေသည်ဖြစ်၍ ထိုအပြစ်သားက နောင်တစိတ်နှင့် ကိုယ်တော့်ထံ မလာမချင်း ကျေးဇူးပြုလိုသော်လည်း မပြုနိုင်ပါ။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပါသည်ဟု နှုတ်ဖျားမှ ဝန်ခံရုံဖြင့် မရနိုင်ပါ။ မိမိအခြေအနေမှန်ကို သိ၍ ဝန်ခံ၍ နောင်တစိတ် မပါရှိပါက စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်လက်ခံခြင်း မပြုမီ ထိုသူ၌ ဦးစွာ စစ်မှန်သော နောင်တစိတ် ရှိဖို့ လိုပါသည်။
အခြေအနေခြင်းတူသော်လည်း နှလုံးသားခြင်း မတူသည့် ထားပြနှစ်ဦးကို ကျမ်းစာတွင်တွေ့ရသည်။2 ပထမတဦးက ကိုယ်တော်အား သင်သည် ခရစ်တော်မှန်လျှင် မိမိကိုယ်ကို၎င်း၊ ကျန်ုပ်ကို၎င်း ကယ်တင်လော့ ဟု နောင်တစိတ်မပါပဲ အချောင်လွတ်လိုသော စိတ်ဖြင့် ဆိုပါသည်။ အခြားတဦးကမူ ထိုသို့မဟုတ်၊ မိမိအဖေါ်ကို ဆုံးမပြီးမှ မိမိတို့သည် ကိုယ့်အပြစ်ကြောင့် ကိုယ့်အပြစ်ကြောင့် ခံရခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းသိ၍ စစ်မှန်သောနောင်တစိတ်ဖြင့် ဝန်ခံပြီးမှ ကိုယ်တော့်ကို ယုံကြည်၍ နိုင်ငံတော်တည်လျှက် ကြွလာသောအခါ အကျန်ုပ်ကို သတိရပါ..ဟု ပြန်၍လျှောက်ဆိုပါသည်။ ထိုအခါ ဒုတိယထားပြသည် ကိုယ်တော်ထံမှ အာမခံချက် ဂတိစကားကို ကြားရပါသည်။ ပထမလူဆိုးအား ကိုယ်တော်က တုံ့ပြန်၍ စကားမဆိုပါ။ ထားပြခြင်း တူသော်လည်း နှလုံးသားခြင်း မတူကြသူ များစွာရှိပါသည်။
ထို့အတူ ကိုယ်တော့်ကို မြည်းစမ်းကြည့်သူချင်း တူသော်လည်း နှလုံးသား ကွာခြားကြသည်။ မြည်းစမ်းခြင်းကို ကိုယ်တော်က နှစ်သက်၍ အဖြေပေးသော်လည်း စုံစမ်းခြင်းကိုမူ မနှစ်သက်၊ အဖြေလည်း မပေးပါ။ နှလုံးသားက ကိုယ်တော်၏ သက်သေကို ရလို၍ မြည်းစမ်းသူအား ကိုယ်တော်က အမှန်ပင်အဖြေပေးမည် ဖြစ်သည်။
ယနေ့ ကိုယ်တော်ထံ ဆုတောင်းသူ အများ ရှိကြသည့်အထဲ အချို့က တောင်း၍ရသည်ဟု ဝန်ခံကြသလို အချို့က ဆုတောင်း၍ မရဟု ဆိုကြပါသည်။ ထိုနှစ်စုတွင် မည်သည့်အစုက မှားနေပါသနည်း။ နှစ်ဦးစလုံးမှန်ပါသည်။ စစ်မှန်သောနောင်တနှင့် အားကိုးသူ၊ တောင်းခံသူသည် ဘုရားထံမှ အဖြေရပြီး နောင်တစိတ်မပါပဲ မရလျှင် အရင်း၊ ရလျှင် အမြတ်ဟု စုံစမ်းသောသဘောနှင့် တောင်းခံသူမှာ အဖြေမရပါ။ ထိုနှစ်ခုသည် နှလုံးသား ကွားပါသည်။ နောင်တစိတ်နှင့် အားကိုးမှုခြင်း ကွာပါသည်။ စစ်မှန်သော နောင်တစိတ်ရှိသူ၏ အပြစ်ကို အထူးသဖြင့် လွှတ်တော်မူမည်ဟု ဂတိတော်ရှိပါသည်။
ကျန်ုပ်တို့အသက်တာ၌ မှန်မိသည့်အပြစ်များကို ဦးစွာဝန်ချ တောင်းပန်ဖို့လိုပါသည်။ အထူးသဖြင့် ခွင့်လွှတ်မည်ဟု ဂတိထားသောအရာမှာ အသက်တာတလျှောက်လုံး ပြုမှားမိခဲ့သည့် မမှတ်မိသော အပြစ်များကိုလည်း ခွင့်လွှတ်မည်ဟု ဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ "ငါ၏ ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့၌ ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့အား ငါပေးသည်"3။ အထူးသဖြင့် သိသောအပြစ်များသာမက ကျန်ုပ်တို့မသိ မမှန်မိသော လူရှေ့၌ မပြောအပ်၊ မပြောနိုင်သော အပြစ်အလုံးစုံမှ ခွင့်လွှတ်ခြင်း ခံစားရသည့်အခါ နှလုံးသာ၌ ဘုရားသခင်ထံမှ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ခံစားရပါသည်။ နှလုံးအတွင်း၌ ခံစားရရှိလာသော မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသက်သေ ရသူက မည်သူမျှ မယုံစေကာမူ သူယုံကြည်သည်။ သူ၌ အတွင်းငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် စိတ်ချမှုရှိသည်။
ကျန်ုပ်တို့သည် လိုအပ်ချက်များအတွက် တောင်းခံရာတွင် သေနေသောပုဂ္ဂိုလ်များထံတွင် တောင်း၍မရ။ အသက်ရှင်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်၌သာ တောင်း၍ ရမည်ဖြစ်သည်။ လူလူချင်း ဆက်သွယ်လိုသည့်အခါ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်က မှန်နေပြီး အသက်ရှင်နေမှသာလျှင် ဆက်သွယ်၍ ရနိုင်သည်။ တချို့သော အချိန်များ၌ ကျန်ုပ်တို့ ဆုတောင်း၍ မရခြင်းသည် နောင်တမရပဲ မိမိလုပ်ချင်သည့် အရာကို ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့ ဇွတ်တောင်းနေ၍ မရခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျန်ုပ်တို့ လိုချင်သောအရာသည် ကျန်ုပ်တို့အတွက် မသင့်တော်၍ သင့်တော်သည့်အရာကို ပြောင်းပြီး ပေးခြင်းကို မသိ၍လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူ့ကဏ္ဍ၌ အလွှာချင်းခြားကာ လူချင်းခြားနားကြသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ခေတ်ကာလ အဆက်ဆက် ခြားနားခြင်းမရှိပါ။ "တရားကို ဖျက်သောသူသည် မတရားသောသူများကို ချီးမွမ်းတတ်ကြောင်း"4 ဖော်ပြထားပါသည်။ မတရားသော နည်းလမ်းဖြင့် စီးပွားရှာဖြင်းကို ဘုရားသခင် အားမပေးပါ။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာက ထပ်မံသတိပေးထားသည်မှာ "လျှင်မြန်စွာရတတ်ခြင်းသည် အပြစ်မကင်း" ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ရရှိထားသော စီးပွားသည် မသန့်ရှင်းပါက တနည်းနည်းဖြင့် ပြန်ထွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ " အဓ္ဓမလူသည် တရားစီရင်ခြင်းကို တားမလည်တတ်၊ ထာဝရဘုရားကို ရှာသောသူအဖို့ကား ခပ်သိမ်းသော စီရင်ခြင်းကို နားလည်တတ်ကြောင်း"5 သွန်သင်ထားပါသည်။ ယုံကြည်သူသည် မတရားစီးပွားကို မမက်မောမိဖို့ သတိပြုသင့်သလို မက်မောနေမိပါကလည်း နောင်တရဖို့ လိုပါသည်။ ထိုသို့ နောင်တရပါက တရားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ဘုရားသခင်က ပေးဖို့ စောင့်နေပါသည်။
ယနေ့ခေတ်ကာလသည် ခက်ခဲသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဘုရားသခင်က မပေး၍ မဟုတ်၊ ပေးပါလျှက် ခံယူသောနှလုံးသားက မသန့်၍ မင်္ဂလာမဖြစ်သလို အစာ စားစရာတွင် သန့်ပါလျှက် ခံယူသောခွက်က မသန့်၍ အစာပါ မသန့်ဖြစ်ပြီး ရောဂါရတတ်သည်များလည်း ရှိတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် မသန့်သောအရာသည် ဆိုးကြိုးကို ဖြစ်ပွားစေကြောင်း သတိပြုမိဖို့ လိုပါသည်။ စစ်မှန်သော နောင်တနှင့် နှလုံးသန့်နေသူသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် နှစ်သက်ဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူအတွက် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည် အဆင်သင့် ပြင်ပြီး ဖြစ်နေပါသည်။
ကျန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သူများ ကယ်တင်ခြင်း ရယုံမျှဖြင့် ကျေနပ်မနေသင့်ပါ။
လောကီကဏ္ဍ၊ ခရစ်ယန်အသက်တာ အသက်ရှင်ရာတွင် မှန်ကန်ခြင်းရှိကြဖို့ အရေးပါလှသည်။ အသက်ရှင်မှု မမှန်ပါက ဒုက္ခကြုံရနိုင်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက အလွဲမယူသင့်ပါ၊ ဘုရားသခင်သည် မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကို မခံပါ။ "လူသည် မိမိစိုက်သည့်အတိုင်း ပြန်၍ ရိတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်"6 သတိပေးဖေါ်ပြထားပါသည်။
ချဲထီ နှလုံးထီ လောင်းကစားမှုများ မသမာ စီးပွားတို့ကို ယုံကြည်သူများ ရှောင်ကြဖို့လိုပါသည်။ အလုပ်ရှင်က သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ချိန်အပြည့် လုပ်အားကိုပေးကြပါ။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ရသောအလုပ်ကို သစ္စာနှင့်လုပ်ပါ။ လိုအပ်သမျှ ကိုယ်တော် ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယန်အသက်တာ၏ အောင်မြင်မှုသည် အခြေအနေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အဖြစ်အပျက်နှင့် မဆိုင်ပါ။ နှလုံးသားနှင့် ဘုရားသခင်၏ သစ္စာနှင့်ဆိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်အခြေအနေနှင့် အသက်ရှင်စေကာမူ စစ်မှန်သော နောင်တစိတ်၌ ကိုယ်တော်ထံတိုးဝင်ပြီး ဆုတောင်းပါ။ ဘုရားရှင်ထံမှ ခံစားရသည့် မစမှုအမျိုးမျိုးအတွက် ချီးမွမ်းပြီး အသက်ရှင်ပါ။ ထိုသို့သော သူသည် ဘုရားရှင်နှင့် လမ်းလျှောက်သောသူ ဖြစ်၍ မည်သို့သော အခြေအနေကို ကြုံရပါစေ၊ ထိုသူဘက်၌ ကိုယ်တော်အတူရှိပြီး ထိုသူ လိုသမျှသော အရာ ကိုယ်တော်က ချပေးဖြစ်ဖြစ်ကြောင်း မေတ္တာနှင့် အသိပေး ဝေငှလိုက်ရပါသည်။
ဆရာဦးတင်မောင်ထွန်း ၁၇-၂-၂၀၀၂ တရားဒေသနာ
1. ဟေရှာ ၅၅း၇
2. လုကာ ၂၃း၃၉-၄၃
3. ယော ၁၄း၂၇
4. သုတ္တံ ၂၈း၎
5. သုတ္တံ ၂၈း၅
6. ဂလာတိ ၆း၇
Read the whole eBook @